Imisebenzi | Tyelela uHultsfred
Ufuna ukwenza ntoni namhlanje?
Ukunyuka intaba, ukuloba, ukuhamba ngebhayisikile, ukuqubha okanye kutheni ungahambi iHultfred The Walk kwaye ufunde okungakumbi ngomnyhadala odumileyo waseSweden? Zininzi izinto ezenziwayo apha- kwaye ngokuqinisekileyo kukho into ekufaneleyo!
Ichibi elinekhaphu enkulu. I-Färgsjön ngumzekelo omhle wendlela ichibi lehlathi elincinci elinokuba yi-eldorado yokuloba kwezemidlalo. Ekwindla
Uphahla lwalo luhamba ngendlela engena kwiindlela ezincinci ezingenazo iimoto. Ukuba ukhetha ukujikeleza umgama wonke, unokujonga phambili kuwo
Umjikelo wesinxibo somkhondo kumkhondo omncinci weFlaten-Gårdveda
Isinxibo sebhayisikile eSmalspåret Flaten-Gårdveda Amava amnandi alungele lonke usapho. Kwisikhululo seFlaten uya kufumana i-cyresso yethu yebhayisikile. Kukho ukupaka iimoto kwaye
I-Björnnässlingan lihlathi lokwenyani elinemithi emidala emide ejikeleze amatye agqunywe ngutshe. Indawo yolondolozo lwendalo iBjörnnäset ikwindawo
EJärnforsen, kukho uthungelwano lweendlela ezintle zokunyuka intaba, zonke ziqala kanye ngaphandle koluntu. Ekuqaleni kukho
Dackestupet-ukuhamba ngebhayisikile entabeni kunye nokuhamba ngeebhayisikile entabeni
Ukusuka phezulu kwithambeka ledackestupet's slalom, ungabona umbono omnandi wommandla weSmlandland. Kuhambo olwehla kwithambeka lokuskiya, uya kufumana imiqobo eyakhiweyo
E-Hjortenleden uhamba kwiindlela ezintle zegrabile kwimimandla yezolimo nakwiilali, ezixutywe neendlela ezincinane eziwela ehlathini.